यस समयमा सब भन्दा धेरै चर्चा गरिएको ऐतिहासिक उपन्यास शीर्षक वर्तमान साहित्य
Historical अहिले ऐतिहासिक उपन्यास शीर्षकहरू बारे सबैभन्दा चर्चा गरिएको
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, नोभेला
मैले पहिलो नम्बर छुटाएको छु आगोको स्तम्भ, को केन follet, जुन भर्खरै प्रकाशित भएको छ र पहिले नै सूचीको शीर्षमा छ। यस्तो देखिन्छ कि वेल्श लेखकका लाखौं अनुयायीहरू उनलाई उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका थिए। तर त्यहाँ अधिक शीर्षकहरू छन् जुन अहिले भर्खरै टिप्पणी गरिएको पहिलो स्थानमा छ ऐतिहासिक उपन्यास। मैले यी राखेको छु 8 पुस्तकहरू, नवीनतादेखि क्लासिक सम्म।
1 उत्तरका प्रभुहरू - बर्नार्ड कर्नेलवेल
2 चन्द्रमाको महल - Weina Dai रान्डेल
3 वुल्फको मुस्कान - टिम लीच
4 सेतो बोअरको नाइट - होसे जेभियर एस्पार्जा
5 स्पार्टन - जेभियर नेग्रेट
6 लामो जीवनकालको गाथा - इवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी
7 सागर र वारका कप्तान - प्याट्रिक ओ ब्रायन
8 म तपाईंको जीवन बचाउनेछु - जोआक्वान लेगुइना र रुबान बुरेन
उत्तरका शासकहरू - बर्नार्ड कोर्नवेल
को गाथामा तेस्रो पुस्तक स्याक्सन, वाइकिs र नर्मनहरू de बर्नार्ड कोर्नवेल, प्रतिष्ठित अंग्रेजी लेखक, rifleman को निर्माता रिचर्ड शार्प र विधा को मास्टर। मा सेट गर्नुहोस् viking आक्रमणहरू को शासनकालमा ग्रेट ब्रिटेन को अल्फ्रेड दि ग्रेट, यो श्रृंखला शीर्षक २०० 2008 मा प्रकाशित भयो।
नायक हो Uhtred Ragnarson, कहिलेकाँही Uhtred Uhtredson को रूपमा चिनिन्छ। नर्थम्ब्रियामा जन्मेका, उनी डेन द्वारा कब्जा गरे र अपनाए। तिनीहरू उसलाई आफ्नो एक को रूप मा शिक्षित। यो उपन्यास Uhtred मा उत्तर पछाडि जानुहोस् अल्फ्रेडलाई वेसेक्सलाई स्वतन्त्र सेक्सन राज्यमा परिणत गर्न मद्दत गरेपछि। ऊ आफ्नो सौतेनी बहिनी खोज्न चाहन्छ, तर बाटोमा तपाईं उथलपुथल र युद्ध मा छन् कि एक मुलुकमा भाग्नु पर्छ।
पक्कै यो गाथा पनि एक छ एक टेलिभिजन श्रृंखला को रूप मा भर्खरै अनुकूलन तपाईंको पहिलो शीर्षकबाट, अन्तिम राज्य.
चन्द्रमा, एस दरबार - Weina Dai रान्डेल
थियो पहिलो उपन्यास यस चिनियाँ लेखक को। हामी यसमा छौं वर्ष 631 र नायक, मेई, जो आफ्नो परिवारसँग चुपचाप बस्दछ, तर परिस्थितिको कारणले, यो भागको भाग हुनेछ रखौटीहरूको हेरेम शाही दरबार को। तपाईंसँग प्रयास गर्न बाहेक अरू विकल्प छैन सम्राटको ध्यान प्राप्त गर्नुहोस्। र उनीले यो कसरी जानेकी एकमात्र तरीकाले गर्ने छः गुणहरू जसले उनलाई बनाउँदछ बहिर्गमन बाँकी रखौटीहरूको बीचमा।
ब्वाँसोको हाँसो - टिम लीच
अझै प्रि-अर्डरमा छ किनकि यो अक्टोबर २ 26 सम्म प्रकाशित गरिएको छैन। लीचले वारविक विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे, जहाँ उनी बस्छन् र रचनात्मक लेखन सिकाउँछन्।
अर्को कथा vikingos नायक, कवि संग भूमिहीन किरीन। उनी र उनको साथी गन्नार, पुरानो वाइकिंग योद्धा आइसल्याण्डमा बसोबास गर्न गए भूतलाई मार्नु त्यो एक छिमेकी फार्म उत्पीडन। तर यो एउटा झुक्याइएको थियो र तिनीहरूले एक जना मानिसलाई मारे। त्यो अपराध, मा १० औं शताब्दी आइसल्याण्ड राजाहरू वा प्रमुखहरू बिना यो चाँदी वा रगतले मात्र शुद्ध गर्न सकिन्छ। वा सामना गर्दै ब्वाँसो मुस्कानको साथ विरोधी.
व्हाइट सूअरको नाइट - जोसेभियर एस्पार्जा
पत्रकार र लेखक, २० भन्दा बढी ऐतिहासिक उपन्यासहरूको लेखक, मा यस उपन्यास प्रकाशित 2012। कथा बताउँछ जोनियोजुन पछिल्ला वर्षहरूमा आठौं शताब्दी हाम्रो युगको, उहाँ आफ्नो परिवार सहित क्यान्ट्याब्रियन पहाडहरू पार गर्नुहुन्छ एक राम्रो देश को खोजी मा। तर तिनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले मुसलमानको लुटपाटको सामना गर्न सक्दछन् वा कर्डोबाको ठूलो बजारमा दासको रूपमा खडा हुनेछन्। तपाईंको अवतारहरू हुनेछन् Reconquista को अग्रदूतहरु.
स्पार्टन - जेभियर नेग्रेट
क्लासिकल फिलोजी मा स्नातक को मुख्य रूप को विधा को खेती गर्दछ कल्पना र विज्ञान कल्पना। तर उनले एक उपन्यास पनि लेखेका छन् इरोटिका सफल
यस बिक्रीको यस महिनाको अन्त्यसम्म प्रि-सेलमा पनि हामी यो वर्षको साथ जान्छौं 480० ए। सी राजा लियोनिडास, Thermopylae को युद्ध मा मर्न अघि, अफिसरलाई एक पत्र पठाउनुहोस् Perseus र उनलाई स्पार्टामा फर्कन र यसलाई आफ्नी पत्नी गोर्गोलाई दिन आदेश दिन्छ। तर वास्तविकतामा पर्सियस राजा दमराटोको छोरो हो, जो दरबारको षडयन्त्रको शिकार भएको थियो, सिंहासनको अधिकार हरायो र साधारण योद्धाको रूपमा बाँच्न सिक्नुपर्दछ।
पुरानोको गाथा - ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी
En 2012 यो उपन्यास प्रकाशित भयो जुन एउटा हो महान बिक्री र महत्वपूर्ण घटना। को इतिहास र सम्बन्ध लामो समय देखि ईगो डेल कास्टिल्लो, १०,10.300०० वर्षको साथ, र Adriana, जवान र दृढ प्रागैतिहासिक जो उनको काम गर्ने संग्रहालयले भाडामा लिएको उनको मूल सन्तान्दरमा फर्किन्छन्, अझै चलनमा छ।
समुद्र र युद्धको कप्तान - प्याट्रिक ओ ब्रायन
क्लासिकको क्लासिक। श्रृंखलामा पहिलो शीर्षक नौसेना साहसिक विधाको ब्रिटिश मास्टर द्वारा लिखित २१ उपन्यासहरू। कप्तान तारांकित गर्दै ज्याक औब्रे र प्रकृतिवादी र जासूस स्टीफन Maturin, तिनीहरू अझै छन् अपरिहार्य ऐतिहासिक उपन्यासको प्रेमी भएकोमा आफूलाई गर्व गर्नेहरूको लागि।
यो पहिलो उपन्यासमा हामी छौं महुनअप्रिलमा 1800पूर्ण रूपमा नापोलियन युद्धहरू ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्स बीच। त्यहाँ कन्सर्टको क्रममा डा। स्टीफन माचुरिनले तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट ज्याक औब्रेलाई भेटे। चरित्रहरू जति फरक छन् ती विपरित छन्, उनीहरूले विकास गर्ने मित्रता सँधैको लागि रहनेछ।
म तिम्रो जीवन बचाउनेछु - जोआक्वान लेगुइना र रुबान बुरेन
जुलाई On मा यस उपन्यासले जितेको थियो अल्फोन्सो एक्स एल सबिओ ऐतिहासिक उपन्यास पुरस्कार यसको सोह्रौं संस्करणमा। लेगुइना र बुरेन द्वारा लिखित, यो को जीवन बताउँछ मेलचोर रोड्रिग्ज, एक अराजकतावादीलाई as को रूपमा पनि चिनिन्छरातो एन्जिल', जसले गर्दा धेरै व्यक्तिको जीवन बचायो गृहयुद्ध र त्यो बुरेनका हजुरबा हजुरआमा हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » Historical अहिले ऐतिहासिक उपन्यास शीर्षकहरू बारे सबैभन्दा चर्चा गरिएको
_50 शेड्स फ्रिड_को ट्रेलर। सिनेमाटोग्राफिक त्रयी बन्द हुन्छ।
छोटो कथा लेख्नका लागि5सल्लाहहरू